"Fadlan Aad Ha Ii Amaanina Haddii Kale....." Solskjaer Oo Weerar Xoogan Ku Qaaday Saxaafada & Waxa Uu Ka Cadhaysan Yahay - Gool24.Net
“Fadlan Aad Ha Ii Amaanina Haddii Kale…..” Solskjaer Oo Weerar Xoogan Ku Qaaday Saxaafada & Waxa Uu Ka Cadhaysan Yahay
July 28, 2020 Apdihakem Omer Adam
Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa weerar ku qaaday saxaafada kubadda cagta kaddib markii ay kooxdiisu guul 2-0 ah kasoo gaadhay Leicester City ee ay ka xaadirtay tartanka Champions League xilli ciyaareedka dambe.
Waxa jiray shakiyo badan oo laga qabay tababare Solskjaer iyadoo saadaalino la bixiyay xilli ciyaareedkan dhammaadka ah kahor intooda badan afarta kaalmood ee sarre lagaga reebay Man United.
Kaddib saadaashii ay khubaro badan oo kubadda cagta ah iyo dhinacyo saxaafada ahi Red Devils kaga reebeen tartanka ugu xiisaha badan England, kooxdaas ayaa caddaysay inay qaldanaayeen booska saddexaadna kaga dhammaysatay miiska kala sarreynta.
Manchester ayaa horumar cajiib ah samaysay qaybtii dambe ee xilli ciyaareedkan iyagoo kasoo kabsaday 14 dhibcood oo ay u jirtay Leicester City oo booska saddexaad wakhtigaas joogtay.
Haddaba, kaddib markii uu xaqiiqsaday inuu doorka dambe ka ciyaarayo CL, Ole ayaa weeraray saxaafada oo uu u arko kuwo shaki ka qabay awoodiisa xilli uu ku dooday inuu dhiiranaan kasii qaado marka ay dhaliilayaan.
Tababaraha ree Norway ayaa yidhi “Umay muuqan sida aad idinku (Saxaafada) rajaynayseen, dhammaan saadaalinuhu waxay ahaayeen kaalmaha lixaad iyo toddobaad”
“Taasi waa caadi, haddii aan eedayn la kulamyo taasi waxa ay iga dhigtaa mid sidii hore ka xoogan oo in badan aaminsan waxa aan qabanayo, fadlan aad ha ii amaanina sababtoo ah waxaad noqon doontaan kuwo muujiya farxad aan muhiim ahayn”